Aqalka Doorashada Hoose oo ka bilaabatay Garoowe iyo Xildhibaankii ugu horeeyay oo la doortay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Aqalka Doorashada Hoose oo ka bilaabatay Garoowe iyo Xildhibaankii ugu horeeyay oo la doortay!!
Aqalka Doorashada Hoose oo ka bilaabatay Garoowe iyo Xildhibaankii ugu horeeyay oo la doortay!!
Magaalada Garoowe ee xarunta Dowlad goboleedka Puntland ayaa ka bilaabatay doorashada aqalka hoose, iyadoo Cali Yuusuf Cali Xoosh uu noqday Xildhibaankii ugu horeeyey ee loo doorto Aqalka hoose Barlamaanka Federalka ah.
Cali Yusuf ayaa cod caqlabiyad ah kaga guulaystay Cabdirashiid Xasan Nadiif oo ah musharixii kale ee la tartamayay, waxana uu helay 49 cod, halka Cabdirashiid Xasan uu isna helay 1 cod, maadaama sida sharciga uu qabo ay mudane kasta soo dooranayaan 50 ergo.
Xildhibaan Cali Yuusuf cali ayaa noqday Xildhibaankii ugu horeeyay ee kamid noqonaya Baarlamaanka Federaalka ee la doorto, waxaana xildhibaanan uu horey Wasiir kuxigeen uga soo noqday maamulka Puntland.
waxaana maanta la dooranayaa 12 mudane, waxaana kuraasta dhanka Puntland uga qeyb galaya Baarlamaanka Federaalka ay yihiin 37 kursi, kuwaasi oo inta dhiman la dooran doono maalmaha soo socda.
Guddiga Federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban iyo kuwa heer goboleed ee Puntland ayaa ku sugan hoolka ay doorashada ka dhaceyso, waxaana doorashada ay ku saabsantahay tan aqalka hoose oo la dooran doono 12 mudane, halka inta dhiman ay maalmaha soo socda ka dhici doonto Garoowe.
Previous PostBurcad Shabaab oo sumeeyay ceelal ku yaala deegaanka Ceel baraf ee G/Sh/Dhexe!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Tarsan oo Shaaciyey Arin Dadka ka yaabisay iyo Hantidii Dawlada ee Muqdisho Laga Wada Xaraashay!